Sweden oo u heelan ka qeyb qaadashada weerarada Libya | Somaliska
Dowlada Sweden ayaa isbuucaan dhowr jeer ku celcelisay in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada weerarada cirka ee lagu haayo ciidamada Qadafi balse waxay sheegeen in ay codsi rasmi ah ka sugayaan ururka NATO. Afti laga qaaday dadka Swedishka ayay 90% waxay taageersanyihiin weerarada cirka iyo xitaa baarlamaanka. Ciidamada cirka ee Sweden ayaa sheegay in ay diyaariyeen 8 ka mid ah diyaaraha dagaalka ee loo yaqaan Jas Gripen oo ay sameyso shirka SAAB. Dadka qaar ayaa shaki galinaya xaqiiqada ka dambeysa diyaaradaha ay ku deeqayaan reer galbeedka ee lagu garaacayo Libya ayadoo la is dhihi karo in ay suuq geyn u tahay diyaaradaha casriga ee ay sameeyaan. Libya ayaa noqon karta Suuq Bandhigeed oo diyaaraha iyo teknolojiyada casriga ah ee cirka lagu soo bandhigayo. Weerarada cirka ee lagu haayo Qadafi ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya wadamo badan oo ay ku jiraan kuwo carbeed sida Qatar iyo Emiratka. Wadamada Yurub ka soo horjeestay waxaa ka mid ah Germalka iyo Ruushka. Waqtigii ugu dambeeyay ee diyaarado ay leedahay Sweden ay ka qeyb qaataan weeraro cirka ah ayaa ahayd sanadkii 1960.
Sweden oo u heelan ka qeyb qaadashada weerarada Libya
Dowlada Sweden ayaa isbuucaan dhowr jeer ku celcelisay in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada weerarada cirka ee lagu haayo ciidamada Qadafi balse waxay sheegeen in ay codsi rasmi ah ka sugayaan ururka NATO. Afti laga qaaday dadka Swedishka ayay 90% waxay taageersanyihiin weerarada cirka iyo xitaa baarlamaanka.
Ciidamada cirka ee Sweden ayaa sheegay in ay diyaariyeen 8 ka mid ah diyaaraha dagaalka ee loo yaqaan Jas Gripen oo ay sameyso shirka SAAB.
Dadka qaar ayaa shaki galinaya xaqiiqada ka dambeysa diyaaradaha ay ku deeqayaan reer galbeedka ee lagu garaacayo Libya ayadoo la is dhihi karo in ay suuq geyn u tahay diyaaradaha casriga ee ay sameeyaan. Libya ayaa noqon karta Suuq Bandhigeed oo diyaaraha iyo teknolojiyada casriga ah ee cirka lagu soo bandhigayo.
Weerarada cirka ee lagu haayo Qadafi ayaa waxaa ka qeyb qaadanaya wadamo badan oo ay ku jiraan kuwo carbeed sida Qatar iyo Emiratka. Wadamada Yurub ka soo horjeestay waxaa ka mid ah Germalka iyo Ruushka.
Waqtigii ugu dambeeyay ee diyaarado ay leedahay Sweden ay ka qeyb qaataan weeraro cirka ah ayaa ahayd sanadkii 1960.